Juventus ayaa isku diyaarineysa inay dalabkii labaad u soo bandhigto kooxda Arsenal oo ku aadan Robin van Persie, waxaana la filayaa inay ku dhawaan doonaan lacagtii ay Arsenal ku dooneysay, iyagoo u soo bandhigaya 20 milyan ginni. (Daily Telegraph)
Manchester United ayaa ceyrsaneysa ciyaaryahanka reer Argentina ee kooxda River Plate Ezequiel Cirigliano. Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa ku jira xulka dalka Argentina ee da’dooda ka hooseyso 20 jirada. (Daily Mirror)
Tababare Roberto Mancini ayaa ay isku dhaceen madaxda kooxda Manchester City oo ku aadan sida ay ugu guuldareysteen inay soo xerogeliyaan kabtanka kooxda Arsenal Robin van Persie. (Daily Mirror)
Sir Alex Ferguson ayaa sheegaya inuu weli doonayo inuu lacag geliyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, waxaana uu si maldahan u sheegay inuu jeclaa inuu la wareego Drogba. (Daily Mirror)
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Spain Santi Cazorla ayaa u sheegaya Arsenal inuu diyaar u yahay inuu ka tago Malaga oo uu iyaga ku biiro. Arsene Wenger ayaa doonaya inuu la soo saxiixo Cazorla oo uu doonayay xagaagii hore, waxaana uu rajo ka qabaa in 20 milyan euro ay u sahli doonto inuu heshiiska soo gabagabeeyo. (Guardian)
Liverpool ayaa tartan kala kulmeysa QPR oo ku aadan weeraryahanka da’da yar ee kooxda Barcelona Gerard Deulofeu. Reds ayaa diyaar u ah inay kula soo wareegaan 7.5 milyan ginni, lakiin QPR ayaa ku dooneysa amaah. (Daily Express)
Liverpool ayaa diyaar u ah inay tijaabiso kooxda Swansea, iyadoo 10 milyan ginni ku dalbadan doona xiddigooda khadka dhexe Joe Allen. (Metro)
Kooxda Serie A ka dhisan AC Milan ayaa wadahadalo la furatay kooxda Arsenal oo ku aadan heshiis ay ku doonayaan inay kula soo wareegaan weeraryahanka doonaya inuu Emirates Stadium ka tago Nicklas Bendtner. (Metro)
Bendtner ayaa sidoo kale wadahadalo kula jira kooxda Turkiga Galatasaray. (Guardian)
Weeraryahanka Manchester United Dimitar Berbatov ayaa laga yaabaa inuu u dhaqaaqo Russia ka dib markii kooxda Zenit ay soo gashay tartanka loogu jiro ciyaaryahanka aan saldhigan ee dalka Bulgaria. (talkSPORT)
Zenit St Petersburg ayaa sidoo kale ku soo biirtay tartanka loogu jiro daafaca kooxda Liverpool Martin Skrtel, waxaana ay rajeynayaan inay ku soo jiidan doonaan mushahar gaaraya 110 kun ginni isbuucii. (Daily Mail)
Andy Carroll ayaa u sheegay Liverpool inaysan ku qasbi Karin inuu ka tago Anfield, xilli lala xiriirinayo inuu xagaagan amaah ama si joogta ah kaga dhaqaaqayo Reds oo uu Janaayo 2011 ku soo biiray. (Daily Star)
Newcastle oo laga soo diiday dalab 4 milyan ginni ah oo ay ku doonayeen daafaca Mathieu Debuchy ayaa mar kale isku diyaarineysa inay la shirtagto dalab kaas ka fiican. (The Sun) Fulham ayaa indhaha ku heysa ciyaaryahankii hore ee Liverpool Ryan Babel oo 25 jir ah kaasoo ka dhacay kooxda Hoffenheim. Babel ayaa dhaliyay kaliya shan goo loo horyaalka ah intii uu kooxda la joogay. (Daily Mail)
Tottenham, Newcastle iyo Swansea ayaa sidoo kale gabaad ugu jira ciyaaryahanka reer Holland Ryan Babel. (talkSPORT)
Tottenham ayaa dooneysa inay qeyb ka dhigto xiddiga da’da yar ee Real Madrid Joselu, si uu qeyb uga noqdo heshiiska Luka Modric uu ugu wareegayo dhanka kale. (Daily Star)
Kooxda Al Halil ayaa dooneysa weeraryahanka Arsenal Park Chu-Young, weeraryahanka West Ham Frederic Piquionne. Kooxda reer Saudi Arabia ayaa sidoo kale dooneysa daafaca Manchester City Kolo Toure. (Daily Mail)
Seddexda wargeys ee ugu waa weyn dalka Talyaaniga Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport iyo Tuttosport ayaa dhamaantood qoraya maanta inuu jiro qorshe uu Fabio Quagliarela ugu wareegayo kooxda Inter, halka bedelkiisa uu Juventus u imaanaya Giampolo Pazzini.
Kooxda Inter Milan ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro weeraryahanka kooxda Siena Mattia Destro. (Gazzetta dello Sport)
Dhanka kale Destro ayaa maanta la kulmi doona kooxda AS Roma, halka Juventus ay iyadana diyaar u tahay inay qaabilaan ciyaaryahanka. (Corriere dello Sport).
Tababaraha kooxda Real Madrid Jose Mourinho ayaa fasax u siiyay Kaka inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee AC Milan (Tuttosport).
Kooxda AC Milan ayaa laga yaabaa inuu ka tago ciyaaryahan kale iyadoo Robinho uu ku dhow yahay inuu boorsadiisa ka qaato San Siro, waxaana uu ku sii jeedaa dalkiisa Brazil. (Goal.com)
Kooxda Barcelona ayaa sidoo kale iska diiday dalab uga yimid AC Milan oo ku aadan weeraryahankooda reer Chile Alexis Sanchez. (Goal.com)
Tababaraha kooxda Real Madrid Jose Mourinho iyo kubadsameeyaha kooxda Los Blancos Ricardo Kaka ayaa shalay kulan yeeshay oo ay kaga hadlayeen mustaqbalka ciyaaryahanka reer Brazil, xilli Kaka ay xiiseyneyso kooxdiisii hore ee AC Milan. (Marca).
Mourinho iyo agaasimaha kooxda ayaa Kaka u sheegay inuusan boos joogta ah ka heli doonin kooxda xilli ciyaareedka soo socda, islamarkaana uu fadhin doono kursiga keydka, waxaana ay qiyaar u siiyeen inuu raadsado koox cusub. (AS)
Kooxda Real Madrid ayaa ku faraxsan in Luka Modric uu ka soo dabcay go’aankiisa mudahaaraadka ahaa islamarkaana uu ku laabtay tababarka kooxda ka dhisan White Hart Lane ee Tottenham, madaama diidmadisa tababarka kooxda ay dhaawacday wadahadaladii u socday labada kooxood. (AS)
Kooxda Athletic Bilbao ayaa dooneysa inay heshiiska u kordhiso weeraryahankeeda Fernando Llorente, iyadoo u soo bandhigay mushahar uu xilli ciyaareedkii ku qaadanayo 4.5 milyan euro, lakiin waxaa dalabkaas diiday wakiilkiisa ahna walaalkiis Chus, kaasoo sheegay inay doonayaan hal milyan dheeri ah. (AS).
Kooxda Valencia ayaa sidoo kale ka fiirsaneysa inay qandaraaska u kordhiyaan daafaca reer Portugal Ricardo Costa, iyadoo qandaraaskiisa haatan ay uga harsan tahay muddo labo sanno ah. (AS)